Mpanamboatra sy mpamatsy mpanara-maso fibre | China Fiber Optical Transmitter Factory
Famaritana momba ny vokatra CATV Model ZTX1310M / ZTX1550M Transmitter fantsom-pifandraisana CATV VSB / AM ny rohy video dia manolotra vahaolana avo lenta ho an'ny fampitana CATV avo lenta. Ny Model ZTX1310M / ZTX1550M dia manome fantsom-pitaovana analogue tsy manam-paharoa amin'ny 45 ka hatramin'ny 1000MHz mamela ny fampitana ny fantson'ny sub-band, low-band, FM, mid-band ary ny fantsona avo lenta. Io fampiasa io dia ahafahan'ny rafitra manolotra serivisy horonantsary noforonin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny VCR, camcorder, na fahitalavitra fahitalavitra, ny maodely ZTX1310M / ZT ...
1550nm External Modulate Optical Transmitter (ZTX1800)
Famaritana momba ny vokatra ZTX1800 dia karazan-tsivana mpandefitra optika modely ivelany 1550nm avo lenta miaraka amin'ny famatsiana herinaratra avo roa heny. Ny loharanom-pahazavana iray manontolo dia mandray ny fantsom-pifandraisana tery, feo ambany, laser DFB onja mitohy, izay manam-pahaizana hampihena ny fitaoman'ny fanaparitahana. Noho ny fananganana marika iraisam-pirenena ny singa fototra sy ny teknolojia fanaraha-maso ny rafitra fanatsarana ny rafitra, ny teknolojia fanaraha-maso ny tambajotra SMNP, ny teknikan'ny masinina ...
Famaritana ny vokatra ZTX1310 andian-dahatsoratra 1310nm optika transmitter dia karazana transmitter optika avo lenta miaraka amin'ny asan'ny AGC. Ny haavon'ny mpandefa dia IU, azo apetaka amin'ny rindrina 19 "mora. Ireo fitaovana lehibe dia mandray AOI, EXSTON na Ortel DFB tabataba ambany izay misy vata fampangatsiahana thermoelectric, laser onja mitohy. Ny indostrian'ny fampisehoana teknika iray manontolo dia mahatratra ny fenitra fampitaovana hafarana mitovy amin'izany, mamatsy sary, tarehimarika na compress ...
Toerana fampitana fampitana optika 1310nm (ZTX1310R)
Endri-javatra 1. Izy io dia natao manokana ho an'ny fanitarana ireo tambajotra coaxial. 2.Izany dia misy asany roa: fandraisana andraikitra, hanoloana ny mpandray optika; fandefasana asa, hery famoahana 2 ~ 4mW, izay azo ampiasaina handaniana 1 ~ 4 node optika. Ny fampiasana ivelany, trano fonenana azo antoka amin'ny rano, dia afaka miasa amin'ny hafanana tena ratsy satria -45 ° C ~ + 85. Parameter teknika Item Unit Parameter Optical Receiver ampahany mandray hery optika dBm -6 ~ + 2 (mahazatra -1) Seranana famoahana isa 1/1 na 2/0 ...
Transiter optika ivelany (ZTX1310W)
Endri-javatra 1. Natao manokana ho an'ny fanitarana ireo tambajotra coaxial izy io. 2. Izy io dia afaka miasa na ny node na ny transmitter kely handany 1 ~ 4 node. 3. Modely ivelany, afaka miasa -45 ~ + 85 ℃. Parameter famaritana Parameter Optical Fandraisana Output No. 1/1 2/0 Working Bandwidth (MHz) 47 ~ 862 Wavelength (nm) 1310/1550 Homo Noise Current 7 Input Power (dBm) -6 ~ +2 mahazatra -1 Fiber Connetor FC / APC Na SC / UPC Famerenana fiverenana optika (dB) ≥40 Fiverenana very RF (dB) ≥16 Unflatne ...
Famaritana momba ny vokatra ZTX1550 andiany 1550nm mpandefa optika dia karazana mpandefitra optika CATV mahazatra. Ny haavon'ny mpandefa dia IU, azo apetaka amin'ny rindrina 19 "mora. Ireo fitaovana lehibe dia mandray ny ortel, MITSUBISHI DFB tabataba ambany izay misy vata fampangatsiahana thermoelectric, laser onja mitohy. Ny indeksan'ny fampisehoana teknika iray manontolo dia mahatratra ny fenitra fampitaovana hafarana mitovy amin'izany, mamatsy sary, tarehimarika na famantarana nomerika voafintina ...